FBSမိသားစုဝင်တို့အတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ! မှော်ဆန်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာပါပြီ: သီချင်းဟောင်းတွေနားဆင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပြီး၊ အိမ်တွေကိုအလှဆင် မိမိရဲ့ အချစ်ရအခင်ရဆုံးဖြစ်တဲ့ - မိသားစုတွေ မိတ်ဆွေတွေအတွက် အရသာရှိတဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်ရာတွေ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကြတဲ့အချိန်ကာလကို ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်. FBSကလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ မိသားစုဝင်တွေရှိနေတဲ့ မိသားစုကြီးတစ်ခုပါ. ယခုလိုနေ့ထူးနေ့မြတ်ကာလတွေမှာ အားလုံးနဲ့အတူတကွရှိခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲပျော်ရွှင်မိပါတယ်. အားလုံးပဲ လာမယ့် ၂၀၁၈မှာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိတို့ဘ၀ခရီးလမ်းကို အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ. ပြီးတော့ တစ်ခု သတိရပေးပါ. ကျွန်တော်တို့က မိတ်ဆွေတို့နောက်မှာ အမြဲရှိနေမှာပါ. <3